Iindaba - Intshayelelo yokuBala
Amanzi enzonzobila enzonzobila eyayisaziwa ngokuba ngumqolo webhola yomsinga owodwa, yeyona nto isetyenziswayo. Iimpawu zayo ukumelana zochuku ephantsi kunye nesantya esiphezulu. Xa ukuthwala kuthwala kuphela umthwalo we-radial, i-angle yoqhagamshelwano ingu-zero. Xa ibhola yamanzi enzonzobila ethweleyo inokususwa okukhulu kwiradial, inentsebenzo ye-angular bearing bearing kwaye inokuthwala umthwalo omkhulu we-axial.
Ukuzimatanisa ibhola ukuthwala: umngxuma cylindrical kunye umngxuma etsobhileyo iintlobo ezimbini zesakhiwo, izinto ikheyi iye ipleyiti yesinyithi, intlaka zokwenziwa njalo njalo. Iimpawu zayo kukuba umjikelo weringi engaphandle umile ngokungafaniyo kwaye unakho ukuzilungelelanisa. Inokuhlawulela iimpazamo ezibangelwe bubukhulu obahlukeneyo kunye ne-shaft deflection, kodwa utyekelo olunxulumene nolwalamano lwangaphakathi nolwangaphandle akufuneki ludlule kwiidigri ezi-3. Ngokukodwa ithwala umthwalo we-radial kwaye inokuthwala umthwalo omncinci we-axial ngexesha elinye. Ukufuduswa kwe-axial ye-shaft (iqokobhe) kuthintelwe ngaphakathi komda wokucoca, kwaye inomsebenzi wokuzilungelelanisa. Ingasebenza ngesiqhelo phantsi kwemeko yokutyekela okuncinci kumalungu angaphakathi nangaphandle. Kufanelekile ukuba iindawo apho ubumbano lomngxunya wokuhlala ungenakuqinisekiswa ngokungqongqo.
Isondo lokuhambisa roller: Into eqengqelekayo kukuhambisa okuphakathi kwecirripetal roller roller cylindrical. Ulwakhiwo lwangaphakathi lwe-roller cylindrical bearing yamkela ulungelelwaniso olufanayo lwee roller, kunye ne-spacer okanye i-spacer block efakwe phakathi kweeroli, ezinokuthintela ukutyekela kwe-roller okanye ukungqubana phakathi kwe-roller, kwaye kuthintele ngokufanelekileyo ukonyuka kwe torque ejikelezayo . I-roller ye-cylindrical kunye ne-raceway ziibheringi ezinxibelelana ngomgama. Umthamo omkhulu womthwalo, ubukhulu becala uthwala umthwalo weradial. Ukungqubana phakathi kwento eqengqelekayo kunye neembambo zeringi kuncinci, okulungele ukujikeleza ngesantya esiphezulu. Ngokuya ngokuba iringi ine-flange, inokwahlulwahlulwa ibe ngumqolo omnye iibheringi ze-roller ezinje ngeNu, NJ, NUP, N, NF, kunye nomqolo ophindwe kabini weebheringi ze-cylindrical roller ezinje ngeNNU kunye ne-NN. Ukuthwala sisakhiwo esahlukanayo sesangqa sangaphakathi kunye nendandatho yangaphandle.
Inaliti mqengqeleki ukuzala: I-roller ethwele nge-roller cylindrical, xa kuthelekiswa nobubanzi bayo, i-roller icekecekile kwaye inde. Olu hlobo lwe-roller lubizwa ngokuba yiroller roller. Nangona inecandelo elincinci lokuwela, ukuthwala kusenomthwalo omkhulu wokuthwala umthwalo. Inaliti mqengqeleki ethwele mayixhotyiswe izileyi ezingcakacileyo ezinde (roller ubukhulu D ≤ 5mm, L / D ≥ 2.5, l ubude mqengqeleki). Ke ngoko ubume be-radial buhambelana. Xa ubukhulu be-diameter sangaphakathi nomthamo womthwalo ziyafana nezinye iintlobo zeebheringi, ubukhulu bangaphandle bobona buncinci, obulungele ngokukodwa isakhiwo esixhasayo esinobungakanani obufutshane bokufakwa kobuso. Ukuthwala ngaphandle kwendandatho yangaphakathi okanye i-roller roller kunye ne-cage assembly kunokukhethwa ngokwemiqathango eyahlukeneyo yesicelo. Ngeli xesha, umphezulu ijenali kunye neqokobhe umngxuma umphezulu elihambelanayo kunye ethwele zisetyenziswa ngqo njengoko engaphakathi kunye nangaphandle iqengqele umphezulu ethwele. Ukuqinisekisa ubungakanani bokulayisha kunye nokusebenza kokusebenza njengokuthwala iringi, ubunzima, ukuchaneka komatshini kunye nomgangatho womgangatho wendlela yomdyarho weshafti okanye umngxunya weqokobhe langaphandle uya kufana nolo lwendandatho ethweleyo. Olu hlobo lokuthwala lunokuthwala kuphela umthwalo we-radial.
Tapered roller ethwele: bobakhe uhlobo eyahlukileyo ethwele. Iiringi zangaphakathi nezangaphandle zebheringi zinemizila yokubaleka. Olu hlobo lokuzala lungahlulwa-hlulwa lube ngumqolo omnye, umqolo ophindwe kabini kunye nemiqolo emine ye-tapered roller bearing. Umqolo owodwa ophethe i-roller tapered ungathwala umthwalo we-radial kunye ne-axial umthwalo odibeneyo kwicala elinye. Xa ukuthwala kuthwala umthwalo we-radial, iya kuvelisa icandelo le-axial, ke ifuna enye into enokuthwala amandla e-axial ngokuchaseneyo. Xa kuthelekiswa nebhola yoqhakamshelwano lwee-angular, umthamo wokuthwala mkhulu, isantya esisezantsi, sinokuthwala umthwalo we-axial kwicala elinye, kwaye unokunciphisa umda wokufuduka kwe-axial ye-shaft okanye yeqokobhe kwicala elinye.
Ukujikeleza kwe-roller ukujikeleza: Ukuthwala kunemiqolo emibini yeeroli, umjikelo ojikelezayo ojikeleze umsesane wangaphandle kunye neendlela zobuhlanga ezimbini zangaphakathi kwi-engile ene-axis ethwele. Indawo yokujikeleza yomjikelo weringi engaphandle ibekwe kwi-axis ethweleyo. Ke ngoko, ukuthwala kukuzilungelelanisa nokuzimela kwaye akubuthathaka kulungelelwaniso lwempazamo phakathi kweshafti kunye nesiseko sokuthwala, esinokubangelwa zizinto ezinjengokuphambuka kweshafti. Ukuthwala ukujikeleza okungqukuva kuyilwe kakuhle, okunokuthwala kungekuphela nje umthwalo ophezulu, kodwa kunye nomthwalo onzima we-axial osebenza kumacala amabini.
Yolula ukuzala ibhola:yenzelwe ukuba athwale umthwalo ngesantya esiphezulu, kwaye ubunjwe yi ring yomsuki weengubo kunye emseleni raceway ibhola lothuli. Ngenxa yokuba amakhonkco enziwe ngomqamelo, iibheringi zebhola ezikhutshiweyo zahlulwe zaziindidi ezimbini: uhlobo olungqiniweyo lomqamelo ongezantsi kunye nohlobo oluzimeleyo lokulungelelanisa uhlobo lomqamelo. Ukongeza, ukuthwala kunokuthwala umthwalo we-axial kodwa kungabi ngumthwalo we-radial. Kusebenza kuphela kwiindawo ezinesantya esisezantsi kunye nomthwalo we-axial.
Yolula roller ulungelelwaniso oluzenzekelayo: Ukuthwala kuphantse kufane nokuzimela kwe-roller. Umjikelo wendlela yomjikelo wesangqa sokuthwala yindawo egudileyo ejolise kwinqanaba elihambelana nomphambili wombhobho. I-roller yolu hlobo lokuthwala ingqukuva. Ke ngoko, inomsebenzi wokufaka ngokuzenzekelayo kwaye awuthatheli ngqalelo kwi-coaxiality kunye ne-shaft deflection. Olu hlobo lokuthwala lusetyenziswa ikakhulu kwi-rig yokomba i-rig, isinyithi kunye noomatshini bentsimbi, i-hydraulic generator, i-motor ethe nkqo, i-marine propeller shaft, i-crane tower, i-extrusion press, njl.
Yolula tapered roller ethwele: Yolula tapered mqengqeleki ethweleyo ungenza compact axial kakhulu uqwalaselo ethwele. Olu hlobo lokuthwala lunokuthwala umthwalo onzima we-axial, alukhathaleli umthwalo wempembelelo, kwaye luqinile. Ngenxa yokuba isiqalelo eqengqelekayo kwi-mqengqeleki oluthwele ethwele mqengqeleki tapered mqengqeleki, isakhiwo, i-ojikelezayo lothuli kunye raceway generatrix ye iqhoshana ziyahlangana kwi ethwele